Kuphele usuku lonke amaphoyisa ebala u-R22m ugcwele amapotimende | isiZulu
Kuphele usuku lonke amaphoyisa ebala u-R22m ugcwele amapotimende
Kubanjwe 5 wezigebengu zibala imali eFree State
Bloemfontein – Amaphoyisa aseBloemfontein achithe usuku lonke ebala imali engamaphepha elinganiselwa ku-R22 million kangakokuthi awazange esaba naso nesikhathi sokubheka ukuthi bangobani abalisa ababili ababanjwe namapotimende angu-4 abegcwele imali esikhumulweni sezindiza esikuleli dolobha, iBram Fischer Airport.
IMantshi, uPaula Berry, izwe eNkantolo yeMantshi yaseBloemfontein ukuthi uMahomed Raeel Baig, 25, waseSherwood kanye noMahomed Hoosen Ismail, 49, wase-Overport, kudingeke ukuba kuqale kuqinisekiswe imininingwane yabo ngaphambi kokuba bakwazi ukufaka isicelo sebheyili, kubika iNetwerk24.
UBaig kanye no-Ismail bavele enkantolo ngoLwesine ngecala lokutholakala nempahla okusolakala ukuthi yebiwe.
OLUNYE UDABA: Kubanjwe 'umthakathi' enqunu efulethini
Ngokwephepha eliqukethe imininingwane ngamacala ababekwe wona, laba zibakhalele ngoLwesibili ntambama ngemuva kokubhadanywa nala mapotimende agcwele imali.
UVic de Bruyn, woMbuso, uthi kwathatha amaphoyisa usuku lonke ukuthi abale le mali. Kwesinye isikhathi umshini osetshenziswa uma kubalwa imali waphuka nokwenza ukuthi amaphoyisa angakwazi ukubheka amakheli abasolwa, ama-passports kanye namaphepha omazisi.
UDu Bruyn uthi kuyasolisa ukuthi laba balisa bahamba ngemoto besuka eThekwini beya eBloemfontein ukuze babambe indiza ebheke eKapa.
Ngaphezu kwalokho uthi nezizathu abazinikezile zokuthi kungani babephethe imali engaka zishiya imibuzo.
Kuthiwa omunye wabo wathi yimali yefa, ekubeni omunye yena athi yimali ayithole ebhizinisini lakhe lokupheka.
Kuyimanje abasolwa basagcinwe esitokisini kanti kulindeleke ukuthi baphinde bavele eNkantolo ngesonto elizayo ukuze bafake isicelo sebheyili.
Emizuzwini eyi-54 edlule